नेपालले नयाँ संविधान पाएपछि तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः कार्तिक १७, २०७२ - साप्ताहिक
कार्तिक १७, २०७२
हैट, के सोध्नुभएको यस्तो ? तेल नभएर बाइक थन्किएको साता दिनभन्दा बढी भैसक्यो । फेरि अस्तिदेखि ग्यास पनि सकियो । अब आफैं अनुमान गर्नुहोस् । हामी जनतालाई कस्तो लागिरहेको होला ?
मलाई ठूलो कमेडीजस्तो लागिरहेको छ ।
संविधान आयो तर तेलको मुहान सुक्यो । देश अझै पछाडि धकेलियो ।
मेरा लागि त खुसीको कुरा हो ।
जनतालाई चाहिँ होइन नेतालाई चाहिँ खुसी नै लागेको होला ।
हामी योभन्दा बढी कति खुसी हुने हो र ? जताततै ग्यास, पेट्रोल तथा डिजेलको अभाव छ । हाहाकार मच्चिएको छ ।
नया संविधान बनेपछि नेपालमा अरू धेरै कुरा बिग्रियो । यो चाहिँ दु:ख लाग्दो पक्ष हो ।
के नै परिवर्तन भएको छ र ? नेताले आफ्नो मनोमानी छाडेका छैनन् ।
खुसी नै लागिरहेको छ ।
नयाँ संविधानको स्वागत गरौं । सबैले खुसी मनाऔं ।
संविधान आएपछि निम्तिएको घटनाले जनतालाई पिरोल्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।
आए पनि नआए पनि उस्तै लागिरहेको छ । यो संविधान आएर हामी गरिबबाट धनी, बेरोजगारबाट रोजगार हुने होइन क्यारे । त्यसैले खासै ठूलो खुसी लागेको छैन ।
अलिअलि खुसी र अलिअलि दु:खी छु म । स्वागत चाहिँ गर्नुपर्छ । सबै नेपालीलाई बधाई ।
हाम्लाई खुसी पनि लाग्या छ, दु:ख पनि लाग्या छ । किनभने हाम्रा घर जाने बाटो मधेस प्रदेशबाट जान्या हुन्... कुरो बुजे हुन्छ ।
संविधान आउनु खुसीको कुरा हो तर हिन्दू राष्ट्र चाहिन्थ्यो, हुन सकेन ।
खुर्पाको बिंडजस्तो लागिरहेको छ । सीमान्तकृतहरूका लागि केही भएन ।
खुसी छौं हामी त ।
एमपि गौतम, राजकुमार खड्का, कस्यप दाहाल, दिप्सन लामागडे, सपना विष्ट, सरिता लामा
सागर राई, दीपेन्द्र विष्ट
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात । गरिबहरूलाई जे आए पनि के फरक पर्छ र ?
नेपाल सुन्दर बनोस् । सबै जना खुसी हुन् । संविधानले सबैलाई समेटोस् ।
धेरै खुसी लागेको छ, देश अब विकासतर्फ अघि बढ्छ कि ? भूकम्पले १० वर्षपछि धकेलिएको नेपाल अब अघि बढ्ने आशा जागेको छ ।
वास्तवमै आत्मादेखि खुसी नहुने त को होला र ? वास्तविक खुसी नै यही हो ।
जनताको हितमा बने पो खुसी लाग्थ्यो । सबै पक्षलाई समेट्न सकेको छैन ।
अत्यधिक खुसी लागेर कता जाऊ, के गरुँ भैराखेको छ ।
यो संविधानलाई स्वागत छ । यो संविधानले देशमा सुख, समृद्धि र शान्ति स्थापना गरोस् ।
कतै दीपावली त कतै ब्ल्याक आउट यस्तोमा संविधानको के महत्व रहन्छ ?
नेपालमा संविधान बन्यो भन्ने कुराले खुसी छु तर संविधानमा नेपाल बन्द गर्नेलाई सजायको व्यवस्था रहेनछ दु:ख लाग्यो ।
कानो गोरुलाई औंसी न पूर्णिमा ।
संविधानमा लेखिएको नियम, कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुपर्छ । पालना नगर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्छ । सबै नेपालीले देशलाई माया गर्नुपर्छ र मिलेर देश बनाउनुपर्छ ।
मलाई त राम्रो लागिरहेको छ ।
सानु साम्पाङ राई
एक थान संविधान पढ्न पाइएको छ । अरू त के हुन्छ र ?
खै, संविधान मात्र आएर त भएन । शान्ति र समृद्धि कहिले आउला ?
खुसी लाग्छ नि । नेपाल अब छिटै बन्छ भन्ने आशा जागेको छ ।
हरेक धनी देशको इतिहास पढ्ने हो भने उनीहरू हाम्रो भन्दा बिजोग स्थितिबाट गुज्रिएका छन् । नयाँ संविधानपछि हाम्रा अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । यद्यपि तिनको सामना गर्दै अघि बढ्ने हो भने पक्कै धेरै गर्न सकिन्छ ।
संविधान आएपछि दु:ख धेरै पाएका छौं । न त खाना खान पाएका छौं, न त भनेको ठाउँमा पुग्न सकेका छौं । नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र संविधान ल्याए, जनतालाइ कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भएको छ ।
आन्दोलन, हत्या, हिंसा आदि बढिरहेको छ । देशमा सुख, शान्ति, अमनचयन कायम होस् । इन्धनका लागि लाइन लाग्नु नपरोस् ।
हाँसिरहन मन लाग्छ । दु:ख त सधैं भोगिरहेकै छौं नि ।
अनिमेष भावना मास्के
म त खुसी छु तर नेताहरू फेरिनुपर्छ अब । पुरानै तरिकाले देश चल्दैन ।
संविधान आउनुभन्दा पहिले जे लाग्थ्यो, अहिले पनि त्यही लाग्दैछ । हामी अभागी नेपाली ।
सुवास खनाल ‘अतीत’
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात । आमनेपालीलाई यसले कुनै फाइदा गर्दैन ।
बहाना सकिएजस्तो लाग्छ । अब देशको विकास गर्नुपर्छ ।
टेकेन्द्र विष्ट मधुपवन
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तो लगिरहेको छ ।
अलि नमीठो लागिरहेको छ । बरु अपेक्षाविपरीत स्थिति अझ बिग्रदै गएको छ ।
फेरि पनि एक छाक खान र एकसरो लगाउन विदेश नै त जानुपर्ने होला नि ? त्यसैले खासै केही भएजस्तो लागेको छैन ।
आई डु देव
प्रकाशित :कार्तिक १७, २०७२
मिस हेरिटेज इन्टरनेसनलमा निशालाई अवार्ड